Indlu encinci eluhlaza - I-Airbnb
Indlu encinci eluhlaza
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguVeronica
Ifulethi elincinci elinesimo somoya kwimizuzu nje embalwa ukusuka kwisikhululo kunye namanyathelo ambalwa ukusuka kwiTeatro Nuovo (indawo eyimbali yeFar East Film Festival). Indawo ezolileyo kwaye ikufuphi kakhulu neziko. Ngaphantsi kwendlu, ivenkile enkulu kunye nebhari.
ILa Casa Verde ibekwe kumgangatho wesithathu (ungakhathazeki: kukho i-elevator!) Kwaye inekhitshi enezixhobo, igumbi lokuhlambela elineshawa, igumbi lokulala kunye ne-terrace.
4.88 · Izimvo eziyi-113
Paduan by birth, Venetian by…
Ndizakunamnkela ndinicacisele yonke into ekhoyo malunga nendlu nengingqi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Udine